के हो मधुमेह, कसरी हुन्छ ? कसरी बच्ने ? « Mayadevi Online News Portal
के हो मधुमेह, कसरी हुन्छ ? कसरी बच्ने ?
प्रकाशित मिति : २९ कार्तिक २०७७ शनिबार ०६:१०
मधुमेह भएमा के हुन्छ त रु वा रगतमा ग्लूकोजको मात्रा बढी भएमा के हुन्छ ?
मधुमेह भएपछि के हुन्छ रु अघि पनि भनियो खानालाई शक्तिमा रुपान्तरण गर्ने काममा समस्या हुन्छ । त्यसपछि ?